Kintana vascular amin'ny tongotra - ahoana no hadio? Fiarovana amin'ny vascular
Sarin'ny vascular ho eny amin'ny tongotra - ny antony sy ny fomba tsara indrindra fitsaboana
Ny fampidiran-dra ao amin'ny hoditra dia atolotry ny arterioles, venules ary kapila. Ny fanitarana tsy mitsaha-mitombo ny sambo kely any amin'ny faritra sasany dia antsoina hoe telangiectasia, maneho ny tenany ho toy ny rastera na ny asterisks eo ambony. Ity toe-javatra ity dia heverina ho toy ny kôdeksa kômetika izay tsy manimba loza ara-pahasalamana ary tsy mitaky fitsaboana.
Ny tambajotra vascular amin'ny tongony - ny antony
Ny olana voalaza dia vokatry ny fiparitahana sy ny famoahana ny arterioles, ny kapila ary ny diera, ny rindrin'io dia very ny elasticité. Na dia tsy voatanisa mazava tsara aza hoe nahoana no mitranga ireo processolojika ireo ary miforona ny asterisks amin'ny tongotra. Araka ny tatitra ara-pitsaboana, ny voka-pifidianana voakasik'izany dia mora kokoa amin'ny vehivavy (80% amin'ny tranga rehetra) amin'ny fahanterana sy ny fahanterana.
Ny takela-podiarana amin'ny tongotra dia mety hipoitra tampoka eo amin'ny fototaravin'ireto toe-javatra manaraka ireto:
fisakafoanana sy sauna matetika;
long load on legs (mijoro, mandeha, mihazakazaka);
fitondrana vohoka sy fiterahana;
fiankinan-doha amin'ny alikaola sy fifohana sigara
faneriterena ara-batana loatra;
aretina ao amin'ny valanorano;
dysfunction of tissue connexion;
tsy fahampian-tsakafo vitamin C;
fanasitranana ny taratra ionisera;
fanimbazimbana sy hypothermia;
sarotra ny asa ary ny hafa.
Afaka esoriko eo amin'ny tongotro ve ny tambajotra vascular?
Mba hialana amin'ilay hadisoana voavoatra dia tokony hifantina dokotera ianao. Ny fitsaboana ny tambajotra vascular amin'ny tongony dia tanterin'ny phlebologist, fa mba hahafantarana ny antony mahatonga ny patolojia, afaka manoro hevitra izy mba hitsidika manam-pahaizana hafa:
Vascular net amin'ny tongotra - ahoana no fomba fialana?
Misy safidy roa lehibe azo ifandovana ity olana ity. Ny fomba nentin-drazana hanesorana ny asterisks amin'ny vascular amin'ny tongotra dia ny fampiasana zava-mahadomelina ao an-toerana (creams, salvos, compresses ary ny hafa) sy ny fanafody ara-dalàna (tablette, sotro). Ny fitsaboana dia tokony hampiarahana ny fomba fanao mba hahazoana antoka fa ny fitsaboana dia feno sy mahomby indrindra.
Ny fanesorana ny tsimokaretina eo amin'ny tongotra dia midika amin'ny fampiasana sigara (ambany) na ny fiantraikany amin'ny fitaovana. Ny fomba mahomby indrindra dia:
Sclerotherapy . Ny vahaolana manokana dia natsofoka ao anaty lain'ny sambo simba miaraka amin'ny fanjaitra matevina, izay mitarika amin'ny fanangonana ny rindrina sy ny fandringanana manaraka.
Mikrotermokoagulyatsiya. Sambo nohosorana amin'ny elanelana misy teflon na volamena matevina. Noho ny tsy fisian'ny fampidiran-dra, dia mihena sy mihalevona izy ireo.
Laser fitsaboana. Ny jiro mitaingina dia manala ny rà ao amin'ny faritra simba. Vokatr'izany, ny rindrin'ny sambo dia miorina miaraka, ary aorian'ny herinandro vitsivitsy dia mamafa tanteraka.
Mamy kintana amin'ny tongotra
Ny fitsaboana amin'ny zava-mahadomelina dia ahitana ny fampiharana ny zava-mahadomelina eo an-toerana any amin'ireo faritra misy fahasimbana Ny fomba mahomby hanesorana ny tsimokaretina vovobila eo amin'ny tongotrao, raha kely sy tsy hita maso izy ireo, dia ny fampiasana menaka miaraka amin'ny vokatra venotonic. Ny vola toy izany dia manamafy ny rindrin'ny kapila, ny diera ary ny arterio ary ny fihenan'ny ra:
Sophia "Ireo kintana vasculaire";
Phleboxar sy ny hafa.
Afobe amin'ny kintana eo amin'ny tongotra
Raha tena maina ny hoditry ny tendrony, tsara kokoa ny mividy fanafody matavy kokoa. Ny menaka dia hampidina ny lalan'ny spider eo amin'ny tongony ary hisoroka ny fikajiana ny epidermis. Ity karazana fitsaboana amin'ny telangiectasias eo an-toerana ity dia miasa toy izany amin'ny crème, saingy novokarina tao anaty vaseline na solika mba hampitombo ny vontoaty matavy. Ny feso kely kely sy voafetra ihany no azo tsaboina miaraka amin'ireto fanafody manaraka ireto:
Renoven sy ny hafa.
Fiarovana amin'ny vascular
Mba hisorohana haingana ny asterisks amin'ny tongotra dia tokony hampiditra fanafody ara-dalàna ny fitsaboana. Ny fihenan'ny tablette, ny fanamafisana ny rindrin'ny gonimaso, ny kapila ary ny arterioles, dia manatsara ny fitombon'ny rà sy ny fiatrehana ny tsindry ao aminy, manakana ny fitomboan'ny taovam-pandrenesana. Ilaina ny hampiasana ny vavonin'ny vavony sy ny fikarakarana ny tsimokaretina ivelany amin'ny tongotra, ary ny fitsaboana amin'ny fanafody fitsaboana dia ahitana ny fampiasana fanafody toy izany:
Avenue 500 ary ny hafa.
Fanafody ho an'ny kintana
Amin'ny fanafody hafa, misy fanafody voajanahary marobe izay manampy amin'ny fanamafisana ny rindrina vovoka. Iray amin'ireo fomba tsotra nefa mahomby ny fomba fanesorana ireo kintana eo an-tongotrareo dia ny fandroana miaraka amin'ny menaka iankinan'ny aina. Mila fitaovana kesika ny fanomanana azy ireo. Afaka mampiasa siramamy katsaka sy maina ianao, sampana sampana, hodi-kazo sy kesika tanora.
Ny fitaovana fandroana
pine needles - 200 g;
rano miboiboika - 1 l;
ranon-tsolika tena ilaina - 5 sotro.
Apetraho ao anaty vilany ny vilany ary asio rano mangatsiaka.
Apetraho ao anaty fatana ny sakafo, tazony 10 minitra ny afo.
Esory ny tapa-kazo.
Tsofy kely ny rano, ampio menaka ilàna azy io.
Apetraho ao anaty siny na lakolosy ny vahaolana, ary apetraho eo amin'ny 10-15 minitra ny tongotra.
Azo tsidihina amin'ny tsindrin-tsakafo avy amin'ny vokatra misy ireo tsiranoka goavam-be amin'ny tongotra. Ireo karazan'olona toy izany dia ampiharina amin'ny faritra voakasika mandritra ny 20-35 minitra. Ireto fanafody manaraka ireto dia ampiasaina ho fanafody:
ravina rotsak'i Kalanchoe;
katsaka vinaingitra vita amin'ny vilany;
Famaritana ny fidirana anatiny
trondro maitso - 1 tbsp. sotro;
rano 250-300 ml.
Hanondrahana akora-menaka amin'ny rano mangatsiaka.
Ny dikany dia midika adiny iray.
Aoroy ny vahaolana mandritra ny 10 minitra.
Mangataha, ento ny fanafody.
Raiso ny rambony amin'ny ampahany kely mandritra ny andro.
Ny fitsaboana amin'ny fitsaboana dia iray volana.
Fanesorana ireo asterisque vascular amin'ny tongotra miaraka amin'ny laser
Ny fomba fiasa dinihina dia manondro fanodikodinana tsotra, izay atao any amin'ny foibe cosmetology. Ny teknikan'ny fitaovana ampiasaina dia ny fomba tsara indrindra hanesorana kintana eny an-tongony. Vokatra azo hita taorian'ny sesyon 1, ary ny telangiectasia dia tsy miforona intsony any amin'ireo faritra voatsabo. Ny fanesorana ny laser-panafody amin'ny tongotra dia ny fiterahana mahery vaika ao anaty kapila. Ny hemôglôbinina dia mandray ny herin'ny hafanana sy ny vala. Ny rindrin'ny sambon-danitra dia miorina miaraka ary mihena tsikelikely tanteraka.
Ny profilaxis amin'ny tambajotra vascular amin'ny tongotra
Mba hisorohana ny fananganana telangiectasias, ilaina ny manaraka fitsipika maro.
Tsimoka eny amin'ny tongotra - fihenan'ny fisorohana:
Mampiasà kiraro mahazatra eo amin'ny foitra miditra.
Alao ny enta-mavesatra amin'ny tongotra miaraka amin'ny fialan-tsasatra, fiovan'ny toerana misy ny vatana.
Jereo ny lanjany.
Aza avela hisy fiantraikany maharitra eo amin'ny tontaliny (mijanona eny amoron-dranomasina, mandihy ao amin'ny sauna, bain, solarium).
Aza mipetraka, atsipazo ny tongotra iray.
Mandehana amin'ny fanatanjahantena, mandehana an-tongotra.
Mialà amin'ny fitafiana sy lamba rongony.
Aorian'ny fandiovana, esory amin'ny rano mangatsiaka ny tongotrao.
Mialà sasatra, aza mifoka.
Ahoana no ahafahanao manavotra olona iray ao an-tranonao?
Burrs - antony
Miteny amin'ny lohataona
Shoe kanto 2014
Nahoana ianao no tsy afaka mijery ny fitaratra rehefa misakafo?
Eclampsia amin'ny saka
Amin'ny firy taona inona no mety ho bevohoka ny saka?
Inona no dikan'ny hoe mahira-tsaina?
Fasana vita amin'ny hazo
Mahita ny fihinina amin'ny tongotra - inona no tokony hatao?
Ny alika kely indrindra